Amaphupho ngokulwa – iAfrika
Uma uphupha ukuthi ushaya umuntu uzobangelwa amahloni empilweni yakho maduzane futhi ubudlelwane bakho abuzukuphumelela. Uma omunye umuntu ekushaya, wena ulokhu uzivikela nje, kusho ukuthi ukuhletshwa kuzokuphathisa ngamahloni.
Amaphupho ngokuxolelana, ukuthelelana amanzi.
Amaphupho ngendlu yotshani.
Tags Izimpi, Ukulwa
4 thoughts on “Amaphupho ngokulwa”
04/08/2020 at 07:39
Sanibona .ngiphuphe babhidliza umuzi ngogandaganda ingabe kuthini
Sawubona ngiphupha umama omncane wami sihilizisazana ethi akambelwe ithuna libiyelwe duze nomama wakhe khona maduze kwavutha umlilo omncane nje phambi kwakhe eqhelile kancane kimina ingabe kushoni Umuntu esaphila
Sacela ukbuza uma uphupha umuntu esenahlukana naye egeza niyxoxela nje kodwa ningasathandani, uphinde umphuphe ethi ucela umthelele manzi ufuna kugeza kushoni?
Sawubona Fezile, kungenzeka ukuthi amanzi afuna ukuma lapho ake ama khona – okusho ukuthi noma wehlukana nalomuntu, mhlawumbe nisengaphinde nibuyelane. Mhlawumbe lomuntu ophupha ngaye unesifiso salokho, noma nguwena onesifiso salokho.Nalu ulwazi olwengeziwe esinalo olungakusiza ukucabangasisa ngaleliphupho lakho: https://iafrika.org/amaphupho-okuphonswa/